Ndi MM ahaziri ahazi ‘Smart City Workshop’ RayHaber
HomeTurkeyMpaghara Marmara34 IstanbulIMM haziri ‘Smart City Workshop’
18 / 11 / 2019 34 Istanbul, General, Ụzọ Awara Awara, Ụgbọ okporo ígwè Tire, Mpaghara Marmara, Turkey
obodo smart ndi ibb haziri
Ndi IMM 'Smart City Workshop' mere ya; N Smart City Workshop ”nke Metrolọ Ọrụ Metropolitan Municipal (IMM) haziri nke Ngalaba Na-ahụ Maka Ọchịchị Obodo, 8 mere na Fraịde Fraịde na Florya Crowne Plaza Hotel na ntinye aka nke ndị otu mba na mba ụwa.
Turkey na ogbako kere ụbọchị nile na òkè nke ụlọ ọrụ na-emepe emepe smart mepere emepe atụmatụ teknụzụ na ụwa, Istanbul nke Smart Ọnọdụ Transforming ụzọ ebe ke map Intelligent mmepe obodo, ihe internet (IOT), Big Data, Ru Intelligence na gbasara nyocha Solutions ngwaahịa na ọrụ mepụtara site na ụlọ ọrụ na-mbipụta tụlere n'ụzọ zuru ezu.
IMA, ụlọ ọrụ ndị mmekọ; ISBAK, Isttelkom, Belbim, ISKI, IETT na ọtụtụ ụlọ ọrụ teknụzụ sonyere na ogbako ahụ, ụlọ ọrụ teknụzụ nwere ike inye ndị Istanbul ihe ọhụrụ na ngwaahịa teknụzụ gbakwunyere.
Ndị dike Nkà na ụzụ na-ekerịta ahụmịhe ha na ngwaahịa ha
N’okwu mmeghe ya, Erol ÖZGÜNER, Onye isi Ngalaba Na-ahụ Maka Mgbakọ, nyere ozi banyere echiche IMM banyere Teknụzụ Smart City n’oge ọhụrụ, ọfụma ndị IMA ga-arụ na usoro a na otu ha si eme atụmatụ ịnye ụmụ amaala Istanbul ọrụ. O kwuru na etinyela ego teknụzụ niile na oge ọhụrụ iji meziwanye ndụ ndị obodo Istanbul. Özgüner mere ka ọ pụta ìhè na itinye ego ọ ga-eme bụ itinye ego nke ndị obodo na ya mere ha chọrọ ịme mkpebi ziri ezi site na ịge ndị niile nwere ngwaahịa ntuli aka na teknụzụ.
Mgbe ahụ, IMM na ndị niile sonyere, Smart City Planning, Internet of ihe (IoT), Big Data, Artificial Intelligence na Analytical Solutions nwere onyinye site na ngosipụta nke ndị teknụzụ mba ụwa dịka Amazon, Google, ATOS na Huawei, yana ngosipụta nke ụlọ ọrụ ndị isi dị ka Koç Digital na Turkcell na akụrụngwa teknụzụ nke obodo anyị. okwu gbanwere echiche. Companieslọ ọrụ ndị ahụ kwuru ụzọ ọgbara ọhụrụ eji arụ ọrụ teknụzụ yana uru dị na iji ha na IMM.
N’ime ihe omumu ihe omumu a, IoT Platform maka Istanbul, akwa, oru, uzo obodo, ebe ikwenyere IMM na uru nke IMM nwere ka esi kwurita, ebe a ka ewetara ihe isi ike na mmejuputa atumatu n’ime Istanbul.
Bozok Na-ahazi Ụlọ Ọrụ Kwadoro site na Ngalaba
A na-enwe Nlekọta Ọrụ Ụgbọ njem Ụgbọ Mmiri na Izmir
Taa na Akụkọ ihe mere eme: 29 March 1880 nke Gọọmentị wuru…
Taa na akụkọ ihe mere eme: 29 March 1880 Nke Ọchịchị wuru
Ndị na - ahụ maka ndị 'IMM' 'Smart Cities'
Obodo Nlekọta Uzo na Ugbo Ogugu
Bursa Smart City Project Mkpụrụ Mkpụrụ
Kars na-edu Smart City Ngwa
Ewubere Smart City Platform na İzmir
Smart City Sakarya 'na-enwe mmasị miri emi
Denizli enweta 'onyinye ntụrụndụ' Smart City '
Ọmụmụ Smart City